अमिताभ बच्चन स्टारर फिल्म ‘सई रा नरसिम्हा रेड्डी ’ ले रिलिज हुनुअगाडि नै कमायो ३०० करोड , जान्नुस् कसरी ? - Medianp.com
शनिबार, ०४, माघ, २०७६
अमिताभ बच्चन स्टारर फिल्म ‘सई रा नरसिम्हा रेड्डी ’ ले रिलिज हुनुअगाडि नै कमायो ३०० करोड , जान्नुस् कसरी ?
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: , ०, ००८:०८0
काठमाडौँ । दक्षिण भारतीय फिल्म ‘सई रा नरसिम्हा रेड्डी’ को रिलिज अगाडि नै डिजिटल राइस बढी मूल्यमा विक्री भएको छ । भारतीय सञ्चार माध्यमका अनुसार फिल्मको रिलिज पुर्व नै ३०० करोड भन्दा बढी ब्यापार गरेको हो ।
यस फिल्मको डिजिटल राइट्स अमेजन प्राइमले लगभग ४० करोडमा किनेको हो । यस फिल्मको डिजिटल प्रिमियर सबै भाषामा प्राइमलाई गएको छ । यस फिल्मलाई सुरेन्दर रेड्डीले निर्देशन गरेका हुन् । फिल्मको कहानी ब्रिटिस शासनको विरुद्धमा पहिलो पटक लड्ने सेनानी नरसिम्हा रेड्डीको सर्घषमा आधारित रहेको छ ।
एक रिपोर्टका अनुसार रिलिज हुनु भन्दा पहिले विश्वभर ३०० करोडको ब्यापार गरेको फिल्मले ११० करोड भन्दा बढी नन थिएट्रिकल राइट्स पाएको छ । फिल्मले स्याटेलाइट राइट्स ६७ करोडमा विक्री गरेको छ । त्यस्तै अडियो राइट्स ३‍ ५० करोडमा बेचेको छ ।
फिल्ममा प्रमुख भूमिकामा साउथ सुपरस्टार चिरंजिवीले निभाउदै छन् । उनीसँगै अमिताभ बच्चन , नयनतार , तमान्ना ,सुदिप,विजय सेतुपति र जगपति बाबुको मुख्य भूमिका रहेको छ । यो फिल्म अक्टुबर २ मा रिलिज हुदैँछ ।
सन्नी चलचित्र ‘पासवर्ड’को प्रिमियरमा सहभागी हुन बिहिबार नेपाल आउँदै